Ndị ọrụ amalite ịnweta nnweta mbụ USB-C cables | Esi m mac
Ndị ọrụ na-amalite ịnweta eriri USB-C na-edochi nke mbụ
Kemgbe Fraịdee gara aga, Apple amalitela a nnọchi usoro nke eriri USB-C na-ezighị ezi nke ejiri 12 ″ Retina MacBooks dị n'etiti Eprel na June 2015, ma obu otu ihe dika kit ma obu zutara ya iche.
Site na mgbe a gbanwere mmemme nnọchi ahụ, Apple kwuru na ọ ga-ebufe eriri ndị ọhụrụ na-akpaghị aka ndị ahịa ndị nyere adreesị ozi-e dị irè n'oge usoro ịzụta ma ọ bụ mgbe ịdenye ngwaahịa ahụ. Akụkọ a na-elekwasị anya n'eziokwu na taa anyị nwere ike ikwu na ndị ahịa mbụ amalitela ịnata eriri USB-C ugbu a.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, onye ọrụ ebugo ihe oyiyi na Twitter ebe a gosipụtara anyị ma eriri ya n'onwe ya na akpa rọba yana leta na-akọwa ọdịda nke ụfọdụ eriri USB-C nke nwere ike ibute ụfọdụ ọdịda na ọnọdụ ụfọdụ. Onye ọrụ na-ekwu na akpaka izipu nke ọhụrụ Gịnị bụ nju ebe ha zọpụta ya mee ndoputa na Ogwe Genius ma gaa na Storelọ Ahịa Apple.
Dị ka Apple si kwuo, a na-ere eriri USB mbụ C-ere yana 12 ″ MacBook Retina ha nwere ike ịda n'ihi nsogbu imewe. Mgbe ejiri ya, eriri ndị emetụtara nwere ike ime ka MacBook ghara ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ oge mgbe ejikọtara ya na nkwụnye ọkụ. Enwere ike ịmata eriri ndị metụtara ya site na akara ngosi ha, nke gụrụ "Onye Apple mere na California. Zukọrọ na China ". Ọhụrụ mere Gịnị nwere otu ederede, ma na-agụnye Oghere Usoro ọgụgụ.
Apple ga-eji dochie eriri ndị emetụtara ruo na June 8, 2018 yabụ ọ bụrụ n’inwere otu eriri ndị emetụtara ịmaralarị na ị nwere ike chere Apple ka o zitere gị ya ma ọ bụ Ọ ka mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịọchi onwe gị iji mee ka usoro a dị ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ndị ọrụ na-amalite ịnweta eriri USB-C na-edochi nke mbụ
Centerlọ ọrụ nyocha ọhụụ na India ga-elekwasị anya na mmepe Maps na atụmatụ obodo
Gbanwee ọdịdị nke keyboard gị MacBook site na iji akara ngosi ndị a